Thursday November 26, 2015 - 14:04:26 in Wararka by Web Admin
Hadaba sharciga cusub sidee u saameynayaa Soomaalida. Sharciyada ku meel gaarka ah ee la bixinayo (Tidsbegränsade uppehållstillstånd) isbedalaan ayaa saameynaya dhamaan soo galootiga. Dadka laga soo qaado xeryaha qaxootiga iyo fam
Hadaba sharciga cusub sidee u saameynayaa Soomaalida. Sharciyada ku meel gaarka ah ee la bixinayo (Tidsbegränsade uppehållstillstånd) isbedalaan ayaa saameynaya dhamaan soo galootiga. Dadka laga soo qaado xeryaha qaxootiga iyo familada caruurta leh ee isdhiibay ka hor maanta ayuusan sharcigaan qaban doonin. Dhamaan dadka kale ayuu qabanayaa sharcigaan oo ay Soomaalidu ku jiraan.